Airbus wepụtara 100th A220 ụgbọ elu emepụtara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Airbus wepụtara 100th A220 ụgbọ elu emepụtara
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Latvia • News • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Airbus emeela 100th A220 ụgbọ elu emepụtara maka onye ahịa n'oge ememme n'isi ụlọ ọrụ ụgbọ elu na Mirabel, Canada. Aircraftgbọ elu ahụ, A220-300, nke achọrọ maka Riga, airBaltic nke Latvia, gosipụtara atụmatụ ụlọ ọhụrụ dị mma na nke nwere oche 149 yana mgbakwunye ọgbara ọhụụ.
Ezinụlọ A220 gbakọtara na Isi Line Assembly Assembly nke Airbus na Mirabel na nso nso a, na usoro nke mgbakọ nke abụọ na Mobile, Alabama. A220 nke mbụ ụwa (nke a na-akpọbu C Series) nyefere na June 2016 na A220-100 onye ọrụ mmalite SWISS.
airBaltic ghọrọ onye ọrụ igba egbe A220-300 mgbe ụgbọ elu Latvia natara nnyefe nke mbụ A220-300 afọ atọ gara aga, na 28 November, 2016. airBaltic kemgbe ahụ nyeghachi iwu ụgbọ elu A220-300 ugboro abụọ - weta usoro nkwụsi ike ya na 50 ugbo elu ka ibu ugbua nnukwu onye ahia Europe A220. Thegbọ elu ahụ na-arụ ọrụ ugbu a n'ụgbọ elu 20 A220-300.
N'ahịa asọmpi dị egwu, arụmọrụ mmanụ ụgbọ elu na-enweghị atụ na arụmọrụ ọfụma enyerela aka airBaltic nke nwere ụgbọ mmiri A220 niile dị ka ọkpụkpụ nke atụmatụ azụmaahịa ọhụrụ ya. airBaltic na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri A220 ya gaa n'ọtụtụ ebe Europe na Russia yana Middle East. Ugbu a ọ na-arụ ọrụ ụgbọ elu kachasị ogologo ugbu a na A220 - ụgbọ elu elekere 6.5 si Riga gaa Abu Dhabi.
Na mbụ e mere ma nyefee dị ka Bombardier C Series, A220 bụ naanị ụgbọ elu ebumnuche wuru maka ahịa oche 100-150; ọ na-anapụta arụmọrụ mmanụ a na-apụghị imeri emeri na nkasi obi ndị njem na-ebuwanye ibu na ụgbọ elu otu-wara wara. A220 na - eme ka ikuku nke ikuku, ihe dị elu na Pratt & Whitney nke ọhụụ PW1500G na - enye turbofan iji nye opekata mpe 20 pasent mmanụ ọkụ ọkụ na oche ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu ọgbọ gara aga, yana nnukwu ihe ọkụkụ na belata mkpọtụ akara ukwu. A220 na-enye arụmọrụ nke nnukwu ụgbọ elu otu ụzọ.
Ihe dị ka 100 A220s na ndị ọrụ isii na mpaghara anọ. Ná ngwụsị nke Ọktoba 2019, ụgbọ elu ahụ anatawo iwu siri ike 530 sitere n'aka ndị ahịa 20 n'ụwa niile.